အင်္ဂလန်လူစာရင်းမှာ မပါဝင်ခဲ့တဲ့အတွက် ဒေါသပေါက်ကွဲနေတဲ့ ၀ဲလ်ရှိုင်းယား
ကမ္ဘာ့ဖလားအတွက် အင်္ဂလန်အသင်းလူစာရင်းမှာ ရွေးချယ်ခံရသင့်တယ်လို့ ဝေဖန်ခဲ့တဲ့ ၀ဲလ်ရှိုင်းယား Wilshere
18 May 2018 . 5:11 PM
၂၀၁၈ ကမ္ဘာ့ဖလားပြိုင်ပွဲအတွက် ထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ အင်္ဂလန်အသင်းလူစာရင်းမှာ မပါဝင်ခဲ့တာကြောင့် အာဆင် နယ်ကွင်းလယ်လူ ၀ဲလ်ရှိုင်းယား Wilshere ဟာ အင်္ဂလန်အသင်းနည်းပြဆောက်ဂိတ် Southgate ကို လူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာကနေ ဝေဖန်ပြစ်တင်မှု ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ဆောက်ဂိတ်ဟာ အင်္ဂလန်အသင်းလူစာရင်း မထုတ်ပြန်ခင် အင်္ဂါနေ့က ၀ဲလ်ရှိုင်းယားဆီ ဖုန်းဆက်ပြီး သူ့ကို ရွေးချယ်မှာ မဟုတ်ဘူးလို့ ကြိုတင်အသိပေးခဲ့တာပါ။ ၀ဲလ်ရှိုင်းယားအနေနဲ့ ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေတုန်းက ဒဏ်ရာပြဿနာတွေကြောင့် ရုန်းကန်ခဲ့ရပေမယ့်လည်း ဒဏ်ရာက ပြန်လာပြီးနောက်ပိုင်း ဒီရာသီမှာ အာဆင်နယ်အသင်းအတွက် ပုံမှန်ကစားခွင့်ရခဲ့ပြီး ခြေစွမ်း ပြကစားနိုင်ခဲ့ပေမယ့် ဆောက်ဂိတ်က သူ့ကို ချန်လှပ်ခဲ့တာကြောင့် အံ့အားသင့်စရာဖြစ်ခဲ့ရတယ်။
၀ဲလ်ရှိုင်းယားဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ ယူရို-၂၀၁၆ ပြိုင်ပွဲကတည်းက အင်္ဂလန်အသင်းနဲ့ဝေးကွာခဲ့ပြီး ဒီနှစ်၊ မတ်လတုန်းက အီတလီ၊ နယ်သာလန်တို့နဲ့ကစားခဲ့တဲ့ခြေစမ်းပွဲအတွက် လူစာရင်းမှာ ရွေးချယ်ခံခဲ့ရပေမယ့် ပွဲထွက် ကစားခွင့်တော့ မရခဲ့ဘူး။ ၀ဲလ်ရှိုင်းယားအနေနဲ့ လာမယ့် ၂၀၁၈ ကမ္ဘာ့ဖလားပြိုင်ပွဲမှာ အင်္ဂလန်အသင်းနဲ့ အတူ ပါဝင်ဆင်နွှဲဖို့ အားခဲထားပေမယ့်လည်း သူ့မျှော်လင့်ချက်က အဆုံးသတ်သွားခဲ့ရပါပြီ။ ဒါကြောင့် ၀ဲလ်ရှိုင်းယားက သူ့ရဲ့ Twitter စာမျက်နှာမှာ “တကယ်လို့သာ ကျွန်တော့်ကို အခွင့်အရေးပေးရင် အသင်း အတွက် အကျိုးရှိအောင် စွမ်းဆောင်နိုင်မှာပါ။ ဒါပေမဲ့ နည်းပြရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကို လေးစားရမှာဖြစ်ပြီး လာမယ့်ပြိုင်ပွဲမှာ အင်္ဂလန်အသင်း အောင်မြင်မှုရပါစေလို့ ဆုတောင်းပါတယ်။ ကျွန်တော်ဟာ အမြဲတမ်း အင်္ဂလန်အသင်း ပရိသတ်တစ်ဦးဖြစ်ပြီး အသင်းက ကစားသမားတွေကိုလည်း အားပေးသွားမှာပါ” လို့ ရေးသားခဲ့သလို မိနစ်ပိုင်းအကြာမှာပဲ” အင်္ဂလန် လူစာရင်းမှာ မပါဝင်ခဲ့တဲ့အတွက် အရမ်းစိတ်ပျက်မိပါတယ်။ ဒီတစ်ရာသီလုံး ကျွန်တော်ဟာ ကြံ့ခိုင်မှု၊ ခြေစွမ်းပိုင်း အားလုံး ကောင်းမွန်ခဲ့တာကြောင့် အင်္ဂလန်အသင်းမှာ ရွေးချယ်ခံခဲ့ရသင့်ပါတယ်” လို့ ပေါက်ကွဲခဲ့ပါတယ်။ ၀ဲလ်ရှိုင်းယားအတွက် စိတ်မကောင်းဖြစ်ရုံက လွဲပြီး ဘာမှ မတတ်နိုင်တော့ပါဘူး . . .
ကမ်ဘာ့ဖလားအတှကျ အင်ျဂလနျအသငျးလူစာရငျးမှာ ရှေးခယျြခံရသငျ့တယျလို့ ဝဖေနျခဲ့တဲ့ ဝဲလျရှိုငျးယား Wilshere
၂၀၁၈ ကမ်ဘာ့ဖလားပွိုငျပှဲအတှကျ ထုတျပွနျခဲ့တဲ့ အင်ျဂလနျအသငျးလူစာရငျးမှာ မပါဝငျခဲ့တာကွောငျ့ အာဆငျ နယျကှငျးလယျလူ ဝဲလျရှိုငျးယား Wilshere ဟာ အင်ျဂလနျအသငျးနညျးပွဆောကျဂိတျ Southgate ကို လူမှုကှနျယကျစာမကျြနှာကနေ ဝဖေနျပွဈတငျမှု ပွုလုပျခဲ့ပါတယျ။ ဆောကျဂိတျဟာ အင်ျဂလနျအသငျးလူစာရငျး မထုတျပွနျခငျ အင်ျဂါနကေ့ ဝဲလျရှိုငျးယားဆီ ဖုနျးဆကျပွီး သူ့ကို ရှေးခယျြမှာ မဟုတျဘူးလို့ ကွိုတငျအသိပေးခဲ့တာပါ။ ဝဲလျရှိုငျးယားအနနေဲ့ ပွီးခဲ့တဲ့နှဈတှတေုနျးက ဒဏျရာပွဿနာတှကွေောငျ့ ရုနျးကနျခဲ့ရပမေယျ့လညျး ဒဏျရာက ပွနျလာပွီးနောကျပိုငျး ဒီရာသီမှာ အာဆငျနယျအသငျးအတှကျ ပုံမှနျကစားခှငျ့ရခဲ့ပွီး ခွစှေမျး ပွကစားနိုငျခဲ့ပမေယျ့ ဆောကျဂိတျက သူ့ကို ခနျြလှပျခဲ့တာကွောငျ့ အံ့အားသငျ့စရာဖွဈခဲ့ရတယျ။
ဝဲလျရှိုငျးယားဟာ ပွီးခဲ့တဲ့ ယူရို-၂၀၁၆ ပွိုငျပှဲကတညျးက အင်ျဂလနျအသငျးနဲ့ဝေးကှာခဲ့ပွီး ဒီနှဈ၊ မတျလတုနျးက အီတလီ၊ နယျသာလနျတို့နဲ့ကစားခဲ့တဲ့ခွစေမျးပှဲအတှကျ လူစာရငျးမှာ ရှေးခယျြခံခဲ့ရပမေယျ့ ပှဲထှကျ ကစားခှငျ့တော့ မရခဲ့ဘူး။ ဝဲလျရှိုငျးယားအနနေဲ့ လာမယျ့ ၂၀၁၈ ကမ်ဘာ့ဖလားပွိုငျပှဲမှာ အင်ျဂလနျအသငျးနဲ့ အတူ ပါဝငျဆငျနှဲဖို့ အားခဲထားပမေယျ့လညျး သူ့မြှျောလငျ့ခကျြက အဆုံးသတျသှားခဲ့ရပါပွီ။ ဒါကွောငျ့ ဝဲလျရှိုငျးယားက သူ့ရဲ့ Twitter စာမကျြနှာမှာ “တကယျလို့သာ ကြှနျတေျာ့ကို အခှငျ့အရေးပေးရငျ အသငျး အတှကျ အကြိုးရှိအောငျ စှမျးဆောငျနိုငျမှာပါ။ ဒါပမေဲ့ နညျးပွရဲ့ဆုံးဖွတျခကျြကို လေးစားရမှာဖွဈပွီး လာမယျ့ပွိုငျပှဲမှာ အင်ျဂလနျအသငျး အောငျမွငျမှုရပါစလေို့ ဆုတောငျးပါတယျ။ ကြှနျတျောဟာ အမွဲတမျး အင်ျဂလနျအသငျး ပရိသတျတဈဦးဖွဈပွီး အသငျးက ကစားသမားတှကေိုလညျး အားပေးသှားမှာပါ” လို့ ရေးသားခဲ့သလို မိနဈပိုငျးအကွာမှာပဲ” အင်ျဂလနျ လူစာရငျးမှာ မပါဝငျခဲ့တဲ့အတှကျ အရမျးစိတျပကျြမိပါတယျ။ ဒီတဈရာသီလုံး ကြှနျတျောဟာ ကွံ့ခိုငျမှု၊ ခွစှေမျးပိုငျး အားလုံး ကောငျးမှနျခဲ့တာကွောငျ့ အင်ျဂလနျအသငျးမှာ ရှေးခယျြခံခဲ့ရသငျ့ပါတယျ” လို့ ပေါကျကှဲခဲ့ပါတယျ။ ဝဲလျရှိုငျးယားအတှကျ စိတျမကောငျးဖွဈရုံက လှဲပွီး ဘာမှ မတတျနိုငျတော့ပါဘူး . . .